कोही बोलेर लम्पसार पर्छन्, कोही नबोलेरै लम्पसार पर्दछन् ओली सरकार बोलेर लम्पसार पर्यो : सी.पी. मैनाली — Motivatenews.Com
कोही बोलेर लम्पसार पर्छन्, कोही नबोलेरै लम्पसार पर्दछन् ओली सरकार बोलेर लम्पसार पर्यो : सी.पी. मैनाली
– प्रकाश थापा मगरकाठमाडौं
काठमाडौँ । नेकपा (माले) का महासचिव सी.पी. मैनालीले ओली सरकार लम्पसार पर्दै गएको बताएका छन् । “कोही बोलेर लम्पसार पर्छन्, कोही नबोलेरै लम्पसार पर्दछन्” महासचिव मैनालीले भने – “ओली सरकार नबोलेरै लम्पसार पर्न थालेको छ । यो पनि एक प्रकारको लम्पसारवाद हो ।”
२०७५ फागुन २३ गते राजधानीमा आयोजित “माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा जी.एम.आर. को म्याद थप नगरियोस्” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेता मैनालीले भन्नु भयो– “यो सरकार कुरा ठुला ठुला गर्दछ, तर व्यवहारमा सानोभन्दा सानो काम पनि गर्न सक्दैन ।” उहाँले लिपुलेक प्रकरणमा दुई पटक चीन भ्रमणमा गएर पनि कुरा नउठाएको तथा माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा अनावश्यक रूपमा जी.एम.आर. को पटक पटक म्याद थपेको भन्दै सरकार खालि कुरा गर्ने स्थितिमा रहेको बताए ।
अहिले राष्ट्रियतामा बढी चोट पुगेको बताउँदै उहाँले सम्पूर्ण देशभक्तहरुको एकता अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । “सम्पूर्ण देशभक्त र कम्युनिस्ट शक्तिहरुको बीचमा एकता भएर आन्दोलन गर्नु पर्दछ” उनको भनाइ थियो । नेपालमा भारत र पश्चिमाहरुको चासो बढ्दै गएको उहाँले बताउनु भयो । “अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपाल र भुटान भारतमा पर्दछ भनेको गल्तीले होइन” उनले भने – “त्यसको अर्थ यदि नेपालले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा चीन विरुद्ध उभिन्न भने नेपालको सार्वभौमिकता विलीन हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिनु थियो ।” उनले नेपालको स्वतन्त्रता अहिलेसम्म पनि ग्यारेन्टेड नभएको बताए ।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय प्रतिनिधि भैरवराज रेग्मीले जति दुःख पाए पनि देशभक्तिपूर्ण भावना कायम राखिराख्ने विज्ञ–विशेषज्ञहरु धन्यवादयोग्य भएको बताए । “सत्तामा पुगेपछि राष्ट्रघात गर्ने नेपालको राष्ट्रिय चरित्र नै बनेको छ” रेग्मीले भन्नु भयो– “त्यसो हुनुको कारण देशको चरित्र अहिले पनि अर्धसामन्ती हुनु नै हो ।” उहाँको ठहर थियो– “देशभक्त शक्तिहरुको हातमा राजनीति नआउँदासम्म यस्तो विकृति कायमै रहनेछ ।” संविधानमा नेपाललाई समाजवाद उन्मुख मुलुक उल्लेख गरिएको प्रसङ्गमा उहाँले भन्नु भयो– “समाजवाद उन्मुख भनेको समाजवाद होइन, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको कुरा हो ।” उहाँले अगाडि भन्नु भयो– “कुनै समय राजा महेन्द्रले पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन खोजेका थिए ।” उहाँले माथिल्लो कर्णाली जस्ता परियोजना राष्ट्रले नै बनाउँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो हुने दावी गर्नु भयो । उहाँले माथिल्लो कर्णाली स्वदेशी पुँजीबाटै बनाउने विषयलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिनु भयो ।
नेकपा (मसाल) का केन्द्रीय प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले तत्कालै सफलता प्राप्त भएन भनेर जनआन्दोलन, जनसङ्घर्ष नै नगर्ने दृष्टिकोण गलत भएको बताउनु भयो । “कम्युनिस्टहरुको लक्ष्य त साम्यवाद हो, अहिले नै साम्यवाद आएर भनेर कम्युनिस्टहरु हात बाँधेर बस्ने ?” उहाँले अगाडि भन्नु भयो– “अपर कर्णाली जस्ता आन्दोलनले जनचेतना उठान गर्दै जनमत निर्माण गर्दछ र त्यो जनमतले एउटा निकास दिन्छ ।” उहाँले आफ्नो क्षमता र पहुँच अनुसार सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट जनआन्दोलनलाई अगाडि बढाउन पहल गर्नु पर्ने बताए ।
माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष भरत शाहीले अवधारणा पत्र, त्यस्तै पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका प्रोफेसर हरि पण्डितले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको व्यापक सम्भाव्यता र जलश्रोत अभियन्ता रतन भण्डारीले जी.एम.आर. को दिवालिया हुन थालेको वित्तीय स्थितिका बारेमा प्रोजेक्टर मार्फत् विषयवस्तु प्रस्तुत गरेपछि कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल, इतिहासविद प्रा.डा. सुरेन्द्र केसी, राष्ट्रिय जागरण परिषदका संयोजक साध्य बहादुर भण्डारी, पूर्व जलश्रोत सचिव डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख सन्त बहादुर पुनले समेत कार्यक्रममा सारगर्भित मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।
जनसमाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष सुभाषराज काफ्लेको अध्यक्षता, माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष भरत शाहीको सञ्चालन र नेकपा (माले) का सचिवालय सदस्य कुमार बेलबासेको स्वागत मन्तव्यमा सम्पन्न सो कार्यक्रमका आयोजकहरु नेकपा (मसाल), नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियान र राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपाल थिए । कार्यक्रम राजधानीको बागबजारस्थित होटेल हार्दिकको सभाकक्षमा सम्पन्न भएको थियो ।